Amandla we-R & D - I-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Uma ufuna sikhiqize umkhiqizo owufunayo, imvamisa, udinga ukusinikeza imidwebo ye-3D noma imidwebo ye-2D yemikhiqizo yakho. Kepha uma ungenayo imidwebo yayo, udinga nje ukusithumela isampula noma wabelane ngemicabango yakho nathi, singakwazi ukudweba imidwebo ngokuya ngesampula noma imicabango yakho.
Imingcele ezenzakalelayo yokulinganisa
Measuring Imingcele ezenzakalelayo yokulinganisa (Uma ungasinikeza isampula): I-Ouzhan inensimbi yokulinganisa ezenzakalelayo ngokuphelele evela eJapan, engakwazi ukukala ngokunembile ubukhulu bemikhiqizo, bese ikhiqiza ngokuzenzakalela imidwebo ye-3D.
Ukumiswa kwe-3D: Onjiniyela baka-Ouzhan nabo bangakha amamodeli wemikhiqizo ye-3D ngokuya ngemibono yamakhasimende.
Ukutholwa kokufakelwa: Imidwebo yokuqala yokwakhiwa idinga ukubuyekezwa ngesandla, iqinisekiswe futhi isayinwe okungenani onjiniyela abathathu.
Ukwenza isampula: Sizokwenza amasampula ngokuya ngemidwebo eqinisekisiwe.
Confirm Isampula isiqinisekiso: Sizothumela isampula kumakhasimende ukuze liqinisekiswe, bese ikhasimende lidinga ukusayina isiqinisekiso sesampula.
Ukukhiqizwa kweMisa: Ngemuva kokuthola isiqinisekiso sesampula esisayinwe yikhasimende nokukhokha kusengaphambili, sizokwenza umkhiqizo omkhulu.
Sidlulise isivivinyo se-ISO 9001: 2015, futhi sinohlelo lokuphatha ikhwalithi yomsindo. Ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yemikhiqizo yethu, sizozama ukukunikeza imikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme.
Idlule ngokusebenzisa isitifiketi sikazwelonke esifanelekile futhi yamukelwa kahle embonini yethu eyinhloko. Ithimba lethu lobuchwepheshe lobunjiniyela lizohlala likulungele ukukusebenzela ukubonisana nempendulo. Sikwazile ukuletha futhi ngamasampula angabizi ukuhlangabezana nama-specs akho. Imizamo efanelekile izokhiqizwa ukuletha isevisi enenzuzo nezixazululo. Uma kufanele ube nentshisekelo enkampanini yethu nasezixazululweni, sicela uxhumane nathi ngokusithumela ama-imeyili noma usishayele ngokushesha. Ukuze ukwazi ukwazi izixazululo zethu nebhizinisi. Futhi uzokwazi ukuza efektri yethu ukuzoyibona. Sizohlala samukela izivakashi ezivela emhlabeni wonke enkampanini yethu.